Xogta Qaraxii Kismaayo iyo Khasaaraha oo kordhay | KEYDMEDIA ONLINE
Xogta Qaraxii Kismaayo iyo Khasaaraha oo kordhay
Kooxaha Heerka Koowaad ee ka dhisan Jubbaland, ayaa shalay ciyaaro uga furmay Garoonka Waamo, ee magaaladda Kismaayo.
KISMAAYO, Soomaaliya - Xog Keydmedia Online ka heshay Sarkaal laamaha Amniga Jubbaland katirsan ayaa sheegaysa in bartilmaameedka qaraxii shalay uu ahaa Axmed Madoobe, maadaama uu isaga daah-furayay tartanka kubadda cagta ee heerka Koowaad ee Jubbaland.
Qaraxa waxaa lagu xiray Gaari Bus ah oo ay leedahay Kooxda JCCI, waxaana loogu tala-galay in marka uu gudaha galo lagu dhex-qarxiyo Garoonka WAAMO, oo uu ku sugnaa Axmed Madoobe iyo mas'uuliyiin kale oo katirsan maamulka Jubbaland.
Laakiin Bam-ka ayaa qarxay inta uusan gaarin Garoonka, oo jidka kusoo jiray, iyadoo uu galaaftay nolosha afar ciyaartooy ah. Dhaawaca ayaa aad u badan, kuwaasoo qaarkood xaaladooda laga deyrinayo.
Axmed Madoobe ayaa daahfuray tartanka kubadda cagta ee heerka Koowaad ee Jubbaland, Waxaana munaasabadda daahfurka wada ciyaaray labada kooxood oo kala ah Dekaddaha iyo Koban.
Madaxwaynaha, qaar katirsan masuuliyiinta labada gole ee Maamulkiisa, iyo dadweynaha badan ayaa daawanayay ciyaarta furitaanka u ahayd tartanka horyaalka heerka Koobaad.
Masuuliyiinta wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada iyo xiriirka kubadda cagta ayaa sido kale munaasabadda goobjoog ahaa.
Qaraxa kadib, Ciidanka Jubbaland ayaa Goobta gaarey oo sameeyay howlgallo baaritaan ah, balse aan cidna lagu soo qaban, maadaama qaraxa uu ahaa mid goor sii horeysay gudaha bus-ka lagu soo diyaariyay.
Ma jirto illaa hadda koox sheegatay mas'uuliyadda Qaraxii shalay galab ka dhacay Kismaayo, kaasoo kusoo beegmay xili magaaladda Khamiistii ka billaabatay doorashadda Aqalka Sare, oo afar Senator lagu soo doortay.
Rooble iyo Farmaajo ayaa tacsiyadeeyay geerida ka dhalatay weerarka, waxayna sheegeen in qaraxa uusan ka weecinaynin dowladda dedaallada dib u dhiska iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
0 Comments Topics: jubbaland soomaaliya